कलियुगका कुरा: 2018
'रुखमा पैसा फल्छ भनेर नेपालीलाई बर्मा ल्याएका थिए फौजीहरुले'
बर्माको पुरानो राजधानी रंगुनबाट करिब छ सय किलोमिटर उत्तर मग्वे प्रान्तको यात्रामा जाँदै थियौं।
‘यी हेर त मुसलमान प्रवेश निषेध भनेर लेखिएको छ,' सहकर्मीले त्यहाँको फोटो देखाउँदै भने, 'तिमीलाई अप्ठेरो पर्ने हो कि?’
रङ र बनोट हेरेर मलाई मुसलमान ठानिएला भन्ने साथीलाई चिन्ता रहेछ।
मैले फिस्स हाँसेर टारेँ।
नभन्दै मग्वेको होटलमा बुफे डिनर खाँदा सुँगुरको मासु प्लेटमा हाल्न खोजेको थिएँ। वेटरले तीनपटक सतर्क गराए, 'पोर्क, पोर्क, पिग मिट, वाता (बर्मेली भाषामा सुँगुरको मासु)।'
सहकर्मीले जिस्क्याए, ‘देखिस्, तँलाई मुस्लिम ठान्यो।’
मैले देब्रे आँखा झिम्काएँ।
बर्मामा जता जाँदा पनि नेपालीभाषी खोज्ने बानी परिसक्यो। रंगुनबाहिर जानु परे बर्मेली नेपालीभाषीका अध्यक्ष सागर घिमिरे र अरु केही अगुवालाई सोध्छु, ‘त्यहाँ नेपालीभाषी भेटिएला?’
मग्वेको नाम सुनेपछि उनीहरुले मुख बिगारे। दायाँबायाँ टाउको हल्लाउँदै भने, ‘अहँ, त्यहाँ त कोही भेटिन्न। बरु अलिक सतर्क हुनुपर्ला है।’
बर्माको मध्यभाग बर्मेलीहरूको मुख्य थातथलो हो। यहाँ बौद्धमार्गी बर्मेलीबाहेक अरु सितिमिति भेटिँदैन। मग्वे त्यही मध्यमागमा पर्छ।
वासुदेव १२ वर्षदेखि त्यहाँको हिन्दु मन्दिरमा पूजारी भएर बसेका रहेछन्। मलाई देख्नासाथ हिन्दीमा बोले। उनलाई म भारतीय हुँ भन्ने लागेछ। धेरै बर्मेलीलाई यस्तै लाग्छ। उनीहरु मलाई भारतीय मुसलमान ठान्छन्। त्यसमाथि नेपाली कहिल्यै नपुग्ने मग्वेमा वासुदेवको अनुमान स्वाभाविक थियो।
उनले अगाडि भने, 'हामीकहाँ कोही नेपाली नआउँदा पनि यी भगवान त हाम्रै हुन् नि। यिनै भगवानको मुख हेरेर न्यास्रो मेट्यो, बस्यो।'
मग्वेस्थित हिन्दु मन्दिरका पुजारी वासुदेव पत्नी इन्द्रमाया र छोरीसँग। तस्बिर: दिपक भट्टराई
‘यो मन्दिर १२५ वर्षअघि गोर्खाली फौजले बनाएको हो। यहाँ पूजारी बस्ने कोही भएनछ। हिन्दु धर्म मान्ने भारतीय बर्मेलीले पूजारी खोज्दै गरेको मैले थाहा पाएँ,' वासुदेवले यति भनेपछि मन्दिरमा गोर्खाली फौजले बनाएको निशानी खोज्न मन लाग्यो।
'त्यसो भए त अलि अलि समाज रहेछ नि,' मेरो यस्तो प्रतिक्रियामा उनले भने, ‘के को समाज, कसैले त हिन्दी बुझ्दैनन्। बर्मेली भाषा मात्र बोल्छन्। कति 'काव्या' भइसके, कति पूरै बर्मेली।’
यहाँ आप्रवासीले आदिवासी वा रैथानेसँग बिहे गरेर जन्मेको सन्तानलाई 'काव्या' भनिन्छ। आफूलाई वासुदेवको ठाउँमा राखेर सोचेँ, ‘ओहो! १२ वर्षसम्मको यस्तो बसाइ, जहाँ आफूसँग संस्कार र सँस्कृति मिल्ने, मातृभाषा बोल्ने भनेको श्रीमती र साना छोराछोरी मात्र।’
मलाई वासुदेवको जजमानले न्वारन र श्राद्ध नगरेको भन्दा पनि यिनको दक्षिणा गुमेकोमा पिर लाग्यो। सोधेँ, 'अनि तपाईं त पूजारी, कसरी चल्छ त घरखर्च?
वासुदेवलाई नेपालमा आफ्नो थातथलो यकिन सम्झना छैन। यत्ति सम्झन्छन्, ‘बाले हामी नेपालको इलामबाट आएको हौं भन्नुहुन्थ्यो।'
बर्मेली नेपालीहरु विद्रोहीलाई कि 'बागी' भन्छन्, कि 'जंगली'। अहिले पनि यहाँका विभिन्न राज्यमा एक दर्जनभन्दा धेरै सशस्त्र समूह स्वायत्त शासनसहितको संघीयता माग गर्दै सक्रिय छन्।
यो घटना सन् १९८८ अगस्ट ८ देखि तत्कालीन सैनिक शासनविरुद्ध बर्मेली जनताले गरेको आन्दोलनको हो। १९८८ को आठौं महिना (अगस्ट), ८ तारिखबाट सुरु यो आन्दोलनलाई बर्माको इतिहासमा '८८८८' भनेर चिनिन्छ। यहाँ तीन हजारभन्दा धेरै बर्मेली सहिद भएका थिए। कतिपयले आन्दोलनमा मृत्यु हुनेको संख्या दस हजारसम्म पुगेको अनुमान गरेका छन्। यही आन्दोलनबाट बर्मेली प्रजातान्त्रिक नेतृ आङ सान सू चीको उदय भयो।
‘मेरी आमाले १४ जना सन्तान जन्माउनुभयो, हामी १३ जना अझै छौं,’ इन्द्रमायाले भनिन् 'मेरो काकाको पनि एकै आमाबाट १४ जना छोराछोरी थिए।'
भनिन्, 'यिनीहरू पढ्ने स्कुलमा अस्ति छोरालाई ‘कला’ भनेर कुटेछन्। साथीहरूले दुःख मान्दै थियो। मैले स्कुल गएर कुरा गरेपछि शिक्षिकाले अरु विद्यार्थीलाई ‘यिनीहरू पूजारीका छोराछोरी हुन्। माछामासु केही खान्नन्’ भनिछन्। अहिले त साथीहरूले माया गर्छन् भन्छ केरे।’
कहाँ मुलसमान प्रवेश निषेध लेखिएको गाउँ, कहाँ म ठ्याक्कै मुसलमानजस्तो देखिने केटाका लागि बौद्धमार्गी आमाले दुई घन्टा खर्चेर ल्याइदिएको तातो दूध!
(सेतोपाटीमा पहिलोपटक दिपक भट्टराई को बाइलाइनमा मग्वे (म्यानमार) बाट भदौ १४, २०७५ मा प्रकाशित)